दैलादैलामा पिरती साट्दै ६९ वर्षीय गन्धर्व – गोर्खा संसार
दैलादैलामा पिरती साट्दै ६९ वर्षीय गन्धर्व
गोर्खा संसार२०७४, २३ चैत्र शुक्रबार १५:३१
रोल्पा, २३ चैत ।
घुघुतीले खोर लायो डाली हुइती हुइती
भेट हुने भा मासै होइजा नहो कैती कैती
मही पा¥यो घार्रघुर्र ठेकी लाग्यो तर
लाग्छ माया लाहुरेको भन्न हुँदैन र ?
मीठो स्वर, सुरिलो भाका अनि सारङ्गीको ¥याइ¥याईं धुनसँगै सुमधुर गीत गाइरहँदा लाग्थ्यो कुनै अधबैँसे पिरतीको भाकामा रमाइरहेको छ । तर यो सुरिलो आवाज कुनै अधबैँसे युवाको नभई ६९ वर्षीय वृद्ध हिमकान्त गन्धर्वको थियो ।
बिहीबार उहाँ रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ बजारमा सारङ्गी रेट्दै दिनभर घुमिरहनुभयो । चाउरी परेको बूढो अनुहार, सेतै फुलेको कपाल, घाँटीमा दुईफन्का बेरिएको गलबन्दी अनि मैलो इस्टकोट लगाएर दैलादैलामा पिरती साट्दै हिँडेका वृद्ध गन्धर्वले रोल्पालीलाई एक प्रकारको मोहनी नै लगाएको भान हुन्थ्यो । युवायुवतीमात्र होइन वृद्धवृद्धासमेत उहाँको वरिपरि झुम्मिएका थिए । हातमा सारङ्गी काँधमा दिनभरिको कमाइको पोको बोकेर घरघरै हिँडेको देख्दा लाथ्यो उहाँमा अझै पनि १६ वर्षीय युवकमा जत्तिकै जोश अनि जाँगर छ ।
“उमेर बूढो भए पनि मन बूढो हुँदैन मैयाँ, मान्छेको जिन्दगी अनि यो माया भन्ने चिज नै अनौठो हुँदो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो – “हेर्दा बूढो देखिन्छु जवानीमा जति हिँड्डुल गर्न सकिँदैन तर मन फेरिएको छैन अझै उस्तै लाउँलाउँ खाउँखाउँ लाग्छ । ताजै छन् रहरहरु ।”
बूढागाउँ–३ लिङ्दुङ रोल्पामा २००७ सालमा जन्मनुभएका गन्धर्वले करीब १२ वर्षको उमेरदेखि सारङ्गी रेट्न सिक्नुभएको हो । बाल्यकालदेखि नै आफ्ना बुबाको पछिपछि हिँड्दै गर्दा १४ वर्षको उमेरमा उहाँले सम्पूर्ण रुपमा सारङ्गी बजाउन र गीत गाउन सिक्नुभएको थियो । तर उहाँलाई पढ्ने अवसर जुरेन । पढाइलेखाइ नभएपछि उहाँले यही पेशा रोज्नुभयो, यही पेशामा रमाउनुभयो अनि यही पेशालाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएको छ ।
आउ बसौँ थकाइ मारौँ कदमको डालीमा
मौरी घुम्यो रसमा म भुले मायाँ जालमा
माया बस्यो तिम्रो र हाम्रो
कहिले पनि नहोस् है नराम्रो
यस्तै यस्तै गीत गाउँदै हिँड्ने क्रममा कुनै युवतीलाई आफ्नो माया जालमा पारेपछि उहाँले १८ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । तर दुर्भाग्य उहाँको पहिलो प्रेम सफल हुन सकेन । आफ्नो अतित स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिला हाम्रो पालामा अहिलेको जस्तो मोटरको सुविधा थिएन । हिँडेरै घरदैलो अभियानमा पुग्नु पथ्र्याे । गाउँदै बजाउँदै हिँड्दा दुई तीन महिनामा एकपटक घर आउन पाइन्थ्यो । श्रीमतीलाई समय दिन नसकेपछि उनले पनि मलाई साथ दिन सकिनन् । करीब दुई वर्षमा उनले मलाई छोडेर दोस्रो बिहे गरिन् ।”
यसरी श्रीमतीले साथ छोडे पनि उहाँको मीठो आवाज र सारङ्गीले भने साथ छोडेन जसका कारण २१ वर्षको उमेरमा उहाँले सारङ्गी रेट्दारेट्दै दोस्रो बिहे गर्नुभयो । उहाँको दोस्रो घरबार सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । श्रीमतीको साथ, सहयोग र मायाले उहाँलाई बूढेसकालमा पनि उत्तिकै आँट र साहस भर्ने गर्छ । तर पनि श्रीमतीको जत्तिकै सारङ्गीको माया लाग्ने भएपछि उहाँले सारङ्गी रेट्न भने छोड्नुभएको छैन । हाल दाङको नारायणपुरमा स्थायी ठेगाना भएका गन्धर्वले श्रीमती घरमै छोडेर रोल्पाका बस्ती बस्ती चहार्नुहुन्छ । पेशा छोडे के खानु ? कहाँ जानु ? पेशा बचाउनकै लागि उहाँले रोल्पा आइपुगेको बताउनुभयो ।
आज गाउँमा घुम्न जान्छु हातमा लौरो समाइ
जिजुबाजे पूर्खादेखि यै छ मेरो कमाइ
कानमा झोला सारङ्गी भिरेर,
गाउँछु गीत संसारै हिँडेर
एकाध गन्धर्वबाहेक यो पेशामा अरु कोही नलागेका कारण आफ्नो संस्कृति र परम्परा लोप हुने हो कि भन्दै उहाँले गीतका माध्यमबाट चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । सरकारले समयमै ध्यान नदिए नेपाली संस्कृति धरापमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आधुनिकताको नाममा पश्चिमी संस्कृतिको सिको गर्दै नेपालीहरुले आफ्नो संस्कृति र परम्परा बिर्सन लागेको भन्दै उहाँले गीतबाट यसरी दुःख प्रकट गर्नुभयो ।
गरीबको घरमाथि आटोपिठो छैन
यो जिन्दगी बचाउनलाई नखाएर भैन
हेर आमा म दुःखी छोरीलाई
दुःख प¥यो जिन्दगीभरिलाई
गन्धर्वका गीतमा समाजको यथार्थ चित्रण झल्किन्थ्यो । गरिबीका कारण आटोपिठो पनि पेटभर खान नपाउँदाको अवस्था र पेट पाल्नका लागि मान्छेले संघर्ष गर्नुपर्ने कुराहरुसमेत उहाँका गीतमा समेटिएका थिए । यसैगरी एउटी चेलीका संघर्षका कथा र जीवन भोगाइका व्यथासमेत उहाँका गीतमा सुन्न पाउँदा वरपर बसेका सबै मन्त्रमुग्ध बनेका थिए ।
डालीडाली चालीचाली झुल्के जोवन जान्छ
अभागीको मेरो दया, माया कल्ले मान्छ
२१ वर्षे उमेरमा भर्खर बिहे भाको
२५ वर्षे उमेरमा स्वामी परदेश गाको
बारबार आँसु गिराएर रोइराकी हौले
बादलबाट चियाएर हेरिराकी हौले
उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेशिएका श्रीमान्का पीडा तथा बाध्यताले बिछोडिएर घरमा बसेका प्रवासीका श्रीमतीका कथाव्यथालाई समेत गीतमा सुनाउनुभयो । शुरु शुरुमा माया पिरतीका गीत गाएर युवायुवतीलाई काउकुती लगाएका गन्धर्वले क्षणभरमै निकै भावुक पनि बनाइदिनुभयो ।
गन्धर्वको पखेटामा सारङ्गीको ताँती
गरीबको निसान थेन चारै अड्डामाथि
खानलागे अनाज य बेच्न लागे भुस
हारल मुद्दा जितल हुन्थ्यो रुप्पे खान्थे घुस
उहाँले गीतका माध्यमबाट समाजमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई पनि उजागर गर्नुभएको थियो । पछिल्ला दिनमा प्रविधिको विकाससँगै गन्धर्वहरु ओझेल परे पनि अघिल्लो पुस्ताका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यम गन्धर्वहरु नै रहेको उहाँको दाबी छ । त्यसैले गन्धर्वहरुको पेशा बचाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । रासस
अत्याधुनिक मेसिन सहित खैरेनी फिटनेस एन्ड हेल्थ क्लबको भव्यताका साथ शुभारम्भ ।।
२०७८, २० पुष मंगलवार ११:४९
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्विराेध
२०७८, १९ पुष सोमबार २१:०९
दराैंदी यातायात सेवा कम्पनी प्रालिकाे प्रथम अधिबेशन सम्पन्नः अध्यक्षमा नारायण खत्री
२०७८, १६ पुष शुक्रबार २०:२८
नवनिर्वाचित बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाइ अभिनन्दन
२०७८, ९ पुष शुक्रबार १९:४६